Annelize र्याप शीर्ष पीडीएफ सिलाई नमूना - को Tailoress
घर / महिला / सबै भन्दा माथि / Annelize र्याप शीर्ष पीडीएफ सिलाई नमूना
उत्पादन थपियो! चाहेको सूचीमा ब्राउज
उत्पादन भएको ईच्छा पहिले देखि नै छ! चाहेको सूचीमा ब्राउज
विभाग: सबै भन्दा माथि, महिला
Annelize Wrap Top पीडीएफ सिलाई नमूना
कृपया हेर्न ANNELIZE WRAP TOP TUTORIAL यहाँ वा यो पृष्ठ खोल्न तल ट्याब क्लिक गर्नुहोस्.
सबै ढाँचाहरू रूपमा पूर्णतया A4 र अमेरिकी पत्र कागजात आकारको रूपमा साथै विभिन्न आकार पृष्ठ छाप्ने अनुमति कागजातहरू स्केल आउन.
हरेक डाउनलोड रंग चित्र वा फोटो संग एक ट्युटोरियल आउँछ. तपाईं आफ्नो ढाँचा सीधा आफ्नो खाता क्षेत्र बाट वा ईमेल मार्फत पठाइएको आफ्नो विशिष्ट डाउनलोड लिंक मार्फत समय असीमित रकम डाउनलोड गर्न सक्छन्. भविष्यको लागि आफ्नो कम्प्युटरमा फाइलहरू सिधा सुरक्षित.
एक 1.5cm सिउनी भत्ता सबै ढाँचा टुक्रा मा समावेश गरिएको छ अन्यथा यसो नभएसम्म.
भुक्तानी र मुद्राहरू
ढाँचा खरीद सजिलो छ!
को 'कार्ट मा' बटन क्लिक गरेर आफ्नो गाडी गर्न उत्पादन थप्न
चेकआउट आफ्नो विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्
बटन 'PAYPAL जानुहोस्' क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंको Paypal खाता लगइन वा अतिथि रूपमा चेकआउट गर्न छनौट
आफ्नो रुचि विधि प्रयोग गरेर भुक्तानी
आफ्नो भुक्तानी पूर्ण भएपछि, जो सामान्यतया लिन्छ मात्र केहि सेकेन्ड, तपाईं Tailoress® तपाईं मेरो खाता मा तपाईंको अर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ फिर्ता निर्देशित गरिने छ (तपाईंले पहिले नै एक थियो वा यदि चेकआउटमा सिर्जना गर्ने छनौट). तपाईंको खाता क्षेत्र बाट तपाईं पनि आफ्नो फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्छन्. भुक्तानी मा तपाईं आफ्नो अर्डर विवरण छिट्टै आफ्नो डाउनलोड लिंक समावेश अर्को इमेल पछि थाहा इमेल सूचना प्राप्त हुनेछ.
PayPal इन्टरनेटबाट खरीद को एक सुरक्षित र सुरक्षित विधि हो. तपाईं एक Paypal खाता Tailoress® बाट खरिद गर्न आवश्यक छैन.
Copyshop आकार: 92cm x 59cm / A4 पन्ने: 15 / अमेरिकी पत्र: 15
को पट्टियाँ निम्न द्वारा सम्बन्ध सिर्जना TUTORIAL सम्बन्ध.
तपाईं एक सिउनी टर्नर छ भने:
lengthways आधा सम्बन्ध गुना र Zig-ZAG सिलाई संग सिउनी भत्ता सी. एक सिउनी टर्नर प्रयोग बाहिर RIGHT पक्ष गर्नुहोस्.
मात्र यो उत्पादन खरिद गर्ने एक समीक्षा छोड्न सक्नुहुन्छ ग्राहकहरु लग इन.
£ 2.99 भाडोमा हाल
£ 2.53 भाडोमा हाल
£ 6.33 भाडोमा हाल
£ 4.95 भाडोमा हाल
GBP, £ युरो, € CAD, $ अमेरिकी डलर, $ JPY, ¥ AUD, $ NZD, $ CHF, CHF HKD, $ SGD, $ सेकेन्ड, kr DKK, kr PLN, zएल पर्याप्त, kr. HUF, Ft CZK, Kन तिनीहरूले, ₪ MXN, $ BRL, $ MYR, RM PHP, ₱ TWD, $ THB, ฿ चलाएर, $ RUB, $
वर्ग चयन सामान टोपी बेबी सामान लेग्गीन्स Preemie बेबी Rompers / Sleepsuits ब्लक बच्चाहरु महिला बच्चाहरु सामान अनुकूली वस्त्र वेशभूषा कपडे लेग्गीन्स Romper / निद्रामा सुट सबै भन्दा माथि कुकुर सामान जातिहरु बुलडग Dachshunds Greyhounds & Whippets वेशभूषा जैकेट Jumpers र पायजामा सबै भन्दा माथि Freebies सामान बेबी कंबल फर्नीचर पुरूष परिधान सामान टी-शर्ट टेस्ट असंगठित महिला सामान कोट / जैकेट वेशभूषा कपडे जम्पर कपडाहरु Jumpsuits अधोवस्त्र छोटकरीमा स्कर्ट Swimwear सबै भन्दा माथि ट्राउजर लेग्गीन्स Tunics
दिगो फेशन डिजाइन - एक ग्रह नर्विच महोत्सव
केंडल उम्कनै नसक्ने Bodysuit Romper पीडीएफ सिलाई नमूना
वीणा Romper Pajama पीडीएफ सिलाई नमूना
Rosana शीर्ष पीडीएफ सिलाई नमूना
लागि बच्चाहरु पीडीएफ सिलाई नमूना Rosana शीर्ष
बन्डल – कुकुर पीडीएफ सिलाई नमूना लागि Timmy Gilet FiDo Jumper जासपर जैकेट
Jarrod खेलौना गुडिया वा Preemie बेबी / Romper पीडीएफ सिलाई नमूना बच्चाहरु 24-36 सप्ताह
जेसिका Preemie बेबी / बच्चाहरु सुट पीडीएफ सिलाई नमूना सो जाओ 24-36 सप्ताह
यो वेबसाइट तपाईंको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग. हामीले यो संग ठीक हुनुहुन्छ मान छौँ, तर तपाईं चाहनुहुन्छ भने अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुन्छ.स्वीकार थप पढ्नुहोस्